Luis Figo oo cadeeyey sababta ka dambeysa hoos u dhaca ku yimid Real Madrid, muxuuse ka yiri Eden Hazard? – Gool FM
Luis Figo oo cadeeyey sababta ka dambeysa hoos u dhaca ku yimid Real Madrid, muxuuse ka yiri Eden Hazard?
(Real Madrid) 26 Okt 2018. Laacibkii hore xulka qaranka Portugal iyo kooxda Real Madrid Luis Figo ayaa sheegay in Eden Hazard uu si weyn u xiiseenayo inuu u dhaqaaqo garoonka Santiago Bernabéu, isagoo dhinaca kale tilmaamay in laacibka reer Belgiam uu haatan ka mid yahay xidigaha ugu wanaagsan kubada cagta.
Luis Figo ayaa wareysi uu ku bixiyay wargeyska “Sport” ee dalka Spain wuxuu kaga hadlay xaalada ay ku sugan tahay kooxda Real Madrid iyo xiisaha Eden Hazard:
“Shaki la’aan Hazard waa ciyaaryahan aad u wanaagsan, wuxuu ka mid yahay xidigaha ugu fiican xiligan kubada cagta, waxay ila tahay inuu doonayo ka ciyaarista kooxda Real Madrid, xili uu heshiis waqti dheer ah kula jiro Blues”.
Intaas kadib Luis Figo ayaa wuxuu ka hadlay xaalada ay haatan ku sugan tahay kooxdiisii hore ee Real Madrid kadib bixitaanka Cristiano Ronaldo.
“Waa sanad kala guur ah, waa wax iska caadi ah in xaaladahan oo kale ay dhacaan, kadib marka aad lumiso mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican taariikhda kubada cagta, kaasoo kooxda u dhalin jiray xili ciyaareedkii goolal badan”.
“Real Madrid waxay ku soo guuleesatay waxyaabo badan sanadihii ugu dambeeyay ee lasoo dhaafay, balse suuragal ma ahan inaad xili kasta guuleysato”.
“Looma cudur daari karo Jose Mourinho” - halyayga Paul Ince oo weerar ku qaaday tababaraha kooxda Manchester United
Madaxweynaha Juventus oo xaqiijiyay in Ronaldo uusan wax dambi ah ku lahayn kiiska kufsiga ahaa ee lagu soo eedeeyay